Doorashadii Madaxweynaha Dowlada KMG ah oo Dib loo Dhigay.
SomaliTalk.com | nairobi | Sept 18, 2004
Kulankii baarlamaanka ay iskugu yimaadeen maanta ayaa laga soo saaray in dib loo dhigay Doorashadii madaxweynaha Dowlada KMG ah illaa Bisha dambe ee Oktoobar 10 keeda, Doorashada madaxweynaha ayaa lagu waday in ay dhacdo maalinta arbacada ah 22/09/04 ee bishan.
Dib udhacan ayaa ka dambeeyay sida uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka KMG ah Shariif Xasan Sh Aadan waqtiga doorashada oo aad u dhawaaday iyo shaqada hor taala baarlamaanka oo aad u badan sidaasna ay isku raaceen baarlamaanka in dib loo dhigo doorashada ilaa bisha dambe tobankeeda.
Waxaa kale oo uu gudoomiyaha Baarlamaanka intaasi ku daray in sidoo kale dib loo dhigay doorashadii gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka lana dooran doono 21/09/04 ee bishan iyadoo lagu waday in maanta la doorto ku xigeenada gudoomiyaha baarlamaanka.
Baaqashada doorashada madaxweynaha Jamhuuriyada federalka soomaaliya ayaa waxaa kale oo hakiyay dagaalada ka soconaya koofurta soomaaliya una baahan in la xaliyo ka hor inta aan la dooran madaxweynaha.
waxa iskaga soo horjeeda laba hogaamiye siyasadeed oo mid ka mid ah (Barre Hiiraale) uu dhaartay kadibna uu dib ugu laabtay halkaas sidaasna ay dagaaladan ku bilowdeen,halka Gen morgan oo uu ka sii horeeyay. Qoraal ay IGAD ka soo saartay labadan hogaamiye ayay ku sheegtay in ay camaaraynayso dagaalkaas uguna baaqday labada dhinacba in ay joojiyaan dibna shirka ugu soo laabtaan.
Shirka hadda socda Nairobi waxaa isku soo agaasimey IGAD oo ka kooban dalalka Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Sudan & Uganda, waxaana uu markii hore (October 2002) ka bilowday magaalada Eldoret, kaddibna bishii Febraayo ee 2003 ayaa loo soo raray Mbagathi, Nairobi. (Soomaaliya waxay xubin ka tahay IGAD laakiin xubin-nimadeedu ma shaqaneyso waqtigan ilaa ay markale dawlad noqoto). Sannad guuradii labaad ayaa ku beegan bisha Oktoobar ee soo socota, taas oo ah tan lagu wado in la doorto madaxweyne.
Ugu Yaraan 15 Qof ayaa Ku Dhintay Dagaallo Ka Dhacay Aagga Kismaayo
Dagaalkan oo dhexmaray Gen. Moorgan iyo isbahaysiga Dooxada Jubba ayaa... Guji....
Wasiirada A/Dibada IGAD oo ku sii jeeda Newyork
Si ay taageero ugu raadiyaan dawlada laga filayo shirka... Guji
WARAYSI:: C/LAHI AXMED CADDOW
"Looma baahna ciidamo shisheeye waayo dagaal waa laga daalay" sidaas waxaa yiri Caddow oo... Guji Sept 17